At Cafe6( 2016 ) - မြန်မာစာတန်းထိုး
By Myanmar Asian TV Channel November 26, 2016
ဒီတစ်ခေါက်မှာ တင်ဆက်ပေးမယ့် ဇာတ်ကားကတော့ 2016 ခုနှစ်ထဲမှာပဲ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Chinese-Taiwanese Comedy , Romance ဇာတ်လမ်းလေးပါ …. ကျောင်းသားဘ၀ကို အခြေခံပြီး ရိုက်ကူးထားခြင်းမျိုးလဲ ဖြစ်ပါတယ် …
Main Cast တွေ အနေနဲ့ကတော့ Zijian Dong,Cherry Ngan,Po-Hung Lin နဲ့ Nini Ou-Yung တို့က ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ - ဇာတ်လမ်းအစ မိုးတွေရွာနေတဲ့ အချိန် မိန်းကလေးတစ်ယောာက်က ကားပျက်သွားလို့ စိတ်ညစ်နေပါတယ် … အဲ့ဒါကို မြင်သွားပြီး အမျိုးသားတစ်ယောက်က သူ့ရဲ့ ကော်ဖီဆိုင်လေးထဲကို လာရောက်မိုးခိုဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် … ထိုမိန်းကလေးက တစ်နယ်တစ်ကျေး ရောက်နေတဲ့ သူ့ချစ်သူနဲ့ ရန်ဖြစ်ထားမှန်း ထို အမျိုးသား သိသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ … စိတ်ပြေလက်ပျောက်ဖြစ်ဖို့အတွက် သူရဲ့ကော်ဖီဆိုင်လေး ဖွင့်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို ပြောပြပါတော့တယ် ....
ဒီဇာတ်လမ်းလေးက Taiwen ကျောင်းသားကား တစ်ချို့ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း တကယ်ကောင်းတဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါ … ဇာတ်လမ်းအစပိုင်းမှာ ပျော်စရာ ရွှင်စရာလေးတွေ ကျောင်းသားဘ၀ ကျောင်းမှာ ဗရုတ်သုတ်ခဆန်တာလေးတွေကို စိတ်နှလုံးပျော်ရွှင်အောင် ရိုက်ကူးထားပြီး … ဇာတ်သိမ်းမှာ သူပေးချင်တဲ့ message ကို ပေးခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းမျိုးတွေပါ …
ယခုဇာတ်လမ်းလေးလဲ ထိုအတိုင်း ကျောင်းသားဘ၀ပုံရိပ်တွေ ဗရုတ်သုတ်ခ ဆန်ဆန်လေးတွေ ကြည့်ရှုသူတို့ မပျင်းရိရလေအောင် ဇာတ်သိမ်းထိ ဆွဲခေါ်သွားပါလိမ့်မယ် … အထူးသဖြင့် ဒီဇာတ်လမ်းလေးထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ LDRS ( Long Distance Relationship ) စုံတွဲ အခန်းလေးတွေ အရမ်းကို ကြည်နူးမိစရာ ကောင်းပါတယ် … အစကြည့်ပြီး ဇာတ်သိမ်း ကိုတန်း သိတဲ့ ဇာတ်လမ်းမျိုးလေးမဟုတ်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးအတွက် Super Sunday မှာ တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ် …
မှာစရာရှိသေးတာက နောက်ဆုံးစာတန်းထိုးတဲ့အခါမှာ တန်းမပိတ်လိုက်ပါနဲ့လို့ … ဇာတ်ဝင်ခန်း တချို့ ကျန်ရှိနေသေးလို့ပါ ….
IMDb Rating အနေနဲ့ကတော့ 6.1/10 ရရှိထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက် လက်မလွှတ်တမ်း ကြည့်ရှုဖို့ကိုတော့ အကြံပေးပါရစေနော် ….
Download on V.I.P Link ( 644MB )
Download on pcloud Link ( 644MB )
Comedy Romance Taiwen
Labels: Comedy Romance Taiwen